Hayat Eve Sığar Apk Download Ho an'ny Android [Fanavaozana 2022]
Salama daholo, te hanana rindranasa hiarovana ny tenanao sy ny olon-tianao amin'ny Covid-19 ianao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android farany, izay fantatra amin'ny anarana hoe Hayat Eve Sığar Apk. Io no fampiharana farany manolotra endrika tsara indrindra, ahafahanao mamonjy ny tenanao sy ny fianakavianao.
Araka ny fantatra dia ketraka be ny olona manoloana ny valan'aretina misy eto amin'izao tontolo izao. Noho izany, samy te hanavotra ny ainy amin’ity aretina ity ny tsirairay. Firenena samihafa no nampiditra fomba samihafa hiadiana amin'ity toe-javatra ity ary ny ankamaroany dia afaka amin'ity areti-mifindra ity.
Saingy mbola atahorana mafy ny aretina valanaretina satria tsy misy ny fanasitranana manokana. Noho izany, ny firenena rehetra dia mbola manandrana manapaka ny rojo. Olona an-tapitrisany no voan'ny aretina manerana an'izao tontolo izao ary i Torkia koa dia iray amin'ireo firenena voa. Ka natolotry ny governemanta ity fampiharana ity.
Io no fomba mahomby indrindra amin'ny fifehezana ity virus ity. Ity rindranasa ity koa dia manolotra fampiasa sy serivisy, izay ahazoan'ny olona tombony. Hizara ny momba an'ity rindranasa ity izahay. Raha hampiasa an'ity rindranasa ity ianao dia amporisihinay ianao hahafantatra momba izany. Noho izany, mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy hahalala bebe kokoa.
Topimaso momba ny Hayat Eve Sığar Apk
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'ny TR Ministry of Health, Torkia. Namboarina izy io mba hisorohana ny trangana areti-mandringana eto amin'ny firenena sy hanaraha-maso azy ireo. Izy io koa dia manome torolàlana ho an'ny olona, ​​izay ahitan'izy ireo fiarovana sy fahatsapana ho voaro.
Hayat Eve Sığar App dia novolavolaina manokana ho an'ny olom-pirenen'i Torkia. Noho izany, raha tsy Trukese ianao, dia tsy mahasoa anao ity fampiharana ity. Saingy raha ao ianao amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo fitaovana hivelomana amin'ity toe-javatra misy ny areti-mifindra ity. Raha te hampiasa an'ity fampiharana ity dia mila misoratra anarana ianao.
Mila manome ny mombamomba anao manokana ianao, amin'izay dia hahazo kaonty maimaim-poana ianao. Raha manolotra fanontaniana vitsivitsy amin'ny fizotran'ny fisoratana anarana, izay hanamarinana fotsiny ny toe-pahasalamanao. Araka ny valiny dia hahazo ny torolalana ianao, izay tokony harahinao.
Izy io koa dia manome ny sarintanin'ny tanànanao, izay misy marika ireo faritra voakasika rehetra. Azonao atao koa ny manampy ny fianakavianao hahalala ny toerana misy azy sy ny toe-pahasalamany. Manome fanairana ihany koa izy io, raha olona voan'ny virus no akaiky anao.
Hayat Eve Sığar Apk dia manome ny valin'ny lisitry ny olona mifandray isan'andro sy ny lisitry ny olona voakasik'izany. Azonao atao koa ny mividy tapakila mandeha amin'ny alàlan'ity rindranasa ity. Misy endri-javatra bebe kokoa amin'ity rindranasa ity izay azonao zahana.
Noho izany, sintomy fotsiny ity app ity ary atombohy ny rafitra fiarovana tsara indrindra. Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity rindranasa ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra.
anarana Hayat Eve Sığa
SOKAJY App/Fahasalamana & Fitness
Araka ny voalazanay ny sasany amin'ireo endri-javatra amin'ity fampiharana ity ao amin'ny fizarana etsy ambony, dia misy bebe kokoa. Noho izany, hizara lisitr'ireo endri-javatra lehibe miaraka aminareo rehetra izahay. Azonao atao koa ny mizara ny traikefanao aminay.
Fiarovana tsara indrindra amin'ny Covid-19
Mampiseho ny toetran'ny COVID misy ny tanàna ny sarintany
Manome fampahalalana mifandraika amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana
Raha te-hisintona ny rakitra Apk dia azonao atao ny mitsidika ny Google Play Store na azonao sintonina avy amin'ity pejy ity. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay misy eo amin'ny ambony sy ambany eto amin'ity pejy ity. Kitiho eo izany ary miandry segondra vitsy, manomboka ho azy ny fisintomana.
Hayat Eve Sığar Apk dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra, izay natolotry ny governemanta Turkey. Noho izany, tokony hampiasa an'ity fampiharana ity ny olona ary hanaraka ny torolàlana. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny Website.
Sokajy Apps, Fahasalamana & Fitness Tags Hayat Eve Sığar, Hayat Eve Sığar Apk, Hayat Eve Sığar App Post Fikarohana
Skin Tools Lite Apk Download ho an'ny Android [2022 FF SKINS]
SGBE fampidinana fampiharana ho an'ny Android [2022 karama fampiharana]